Dhaawacyada xuutiyiinta yamen oo maanta laga daad gurayn doono – Radio
December 3, 2018	38	Like
Kooxda Xuutiyiinta ee dalka Yemen ayaa xaqiijiyay in Diyaarad ay leedahay Qaramada Midoobay ay daad gurayn doonto dagaalameyaal ka dhaawacmay jabhadda Xuutiyiinta, islamarkaana ay geyn doonto Magaalada Caman.
Ku dhawaad 50 ka mid ah Kooxda dhaawacyadda xuutiyiinta ee Culus ayaa lagu wadaa in laga qaado magaalada caasimadda ah ee Sanca taas oo ay gacanta ku hayaan Jabhaduhu, iyaga oo galinka dambe ee maanta la gayn doono Caman.
Waxaa ay sheegeen in tallaabadan uu codasaday Martin Griffiths oo ah ergayga Qaramada Midoobay u qaabilsan Yemen.
“Diyaaradda Qaramada Midoobay ayaa Isniinta ka dagi doonta garoonka caalamiga ah ee Sanca. Saddex dhakhtar oo Yemen u dhashay iyo dhakhtar Qaramada Midoobay ka socda ayaa dhaawacyada ka qaadi doona Sanca waxayna gayn doonaan Masqad.” Sida uu sheegay qof habeennimadii u hadlay xulafada.
Arrintan ayaa looga golleeyahay in lagu dhiso kalsoonida ka hor wadahadallada ay labada dhinac yeelanayaan.
Wadahadallada ay Qaramada Midoobay taageerayso ee u dhaxeeya jabhadda iyo dawladda uu Sacuudigu taageerayo ayaa lagu wadaa in uu dhaco maalmaha foodda inagu soo haya
Labo Gabdhood oo Soomaali ah oo ku Geeriyooday Mareykanka
Ciidamada Booliska Ohio ee dalka Mareykanka ayaa waddo Baaritaano ku aadan geeridda Labo Gabdhood oo ...